डलर कार्ड के हो, कसरी लिने, कार्डमार्फत के–के मा हुँदैछ खर्च ? - NA MediaNA Mediaडलर कार्ड के हो, कसरी लिने, कार्डमार्फत के–के मा हुँदैछ खर्च ? - NA Media
पछिल्लो समय डलर कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैतमा प्रिपेड कार्डमार्फत ५०० डलरसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै डलर कार्ड प्रयोग गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । केन्द्रीय बैंकको कात्तिक महिनाको तथ्यांक अनुसार हालसम्म डलर कार्ड लिनेको संख्या १८ हजार १०० भन्दा बढी रहेको छ ।
उक्त डलर कार्डमा हालसम्म ३९ लाख २४ हजार अमेरिकी डलर लोड भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनमय सञ्चिति विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताए । उक्त अवधिमा लोड भएका मध्ये १८ लाख डलर खर्च भएको उनले बताए । डलर कार्ड जारी हुनभन्दा अघि अनलाइनबाट सामान वा सेवा खरिद गर्दा त्यसको भुक्तानीका लागि नेपालीहरुले विदेशी कार्डको सहारा लिँदै आएका थिए ।
विदेशमा भएका आफन्त वा साथीभाईको कार्डमार्फत यस्तो रकम तिर्नुपर्दथ्यो । तथापि, नेपालमा प्रिपेड डलर कार्ड वा डलर खाता भने यसअघि नै सञ्चालनमा रहेको थियो । केन्द्रीय बैंकले गत चैतदेखि डलर कार्ड सुविधा ल्याएसँगै अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न मिल्ने भएकाले यसमा सेवाग्राहीको आकर्षण बढेको हो ।
डलर कार्डमार्फत मुख्यतयः के–केमा हुँदैछ खर्च ? केन्द्रय बैंकका अनुसार डलर कार्डमार्फत धेरै जस्तो रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनमय सञ्चिति विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलका अनुसार डलर कार्डमा लोड भएको रकम आइएलटीएस, टोफल, जीआरईलगायत विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि खर्च भएको छ । यसको अलावा अमेजन लगायत अनलाइन सपिङमार्फत खरिद गरिएको सामानको भुक्तानी पनि यही कार्डबाट हुने गरेको उनले बताए । कसरी लिन सकिन्छ डलर कार्ड ? यदि तपाईंले खाता भएकै बैंकबाट डलर कार्ड लिने हो भने कार्डका लागि एउटा अनुरोध फारम भर्नुपर्छ । तर बैंकमा आफ्नो केवाइसी विवरण भने अद्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ । प्रचलित कानुन अनुसार आफूले सो रकम खर्च गर्ने भनी स्वघोषणाको फारम पनि ग्राहकले भर्नुपर्छ । एउटा कार्ड लिइसकेपछि अर्को बैंकबाट नलिएको वा नलिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । प्रचलित ऐन, कानुनभन्दा बाहिर रकम प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर यसरी प्रतिबद्धता विपरीत गरेको पाइएमा कारबाही भोग्न तयार छु भन्ने आशय पनि स्वघोषणामा उल्लेख हुन्छ । आफ्नो प्यान कार्ड र नागरिकताको प्रतिलिपि पनि चाहिन्छ । प्यान नम्बर नहुनेले भने यस्तो कार्ड पाउँदैनन् । यदि सो बैंकमा आफ्नो खाता नभएको खण्डमा भने खाता खोल्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।